Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia an'i Sri Lanka » Ny fahafatesan'ny fizarana tsenan'ny FIT?
Ny famaritana marina ny FIT dia ny Foreign Independent Tour na ny Flexible Independent Travel, izay matetika ampiasaina hanondroana ny fizahan-tany tsy miankina, anatiny na iraisam-pirenena, izay tsy misy fitsidihana fonosana. (Laharana: The Travel Industry Dictionary). Mahaleo tena ireo mpizahatany fialamboly ireo, manomana ny diany manokana, ny làlan-kaleha na ny lalan-kalehany manokana, tsy misy fanampiana avy amin'ny fitsangatsanganana vondrona, fandaharam-potoana voalahatra na fipetrahana vondrona hafa. Raha ny zava-misy dia tsy mikasa mialoha ny fizahan-tany ireo mpizahatany ireo, ary tsy mamaky boky mialoha, dia raisina ho ampahany betsaka amin'ny mpanjifa.
Nandritra ny andro lasa, nisy hotely manana taha navoaka izay fantatra amin'ny anarana hoe 'FIT rate' na 'rate rate'. Matetika io no sanda nalaina tamin'ireo vahiny izay nangataka trano honenana tamin'io andro io nefa tsy nandamina mialoha ny famandrihana- Ny fizarana The FIT. Ny vidin'ny tahan'ny talantalana dia somary lafo kokoa noho ny tahan'ny mety ho azon'ny mpanjifa raha toa ka nampiasa masoivoho mpanao dia lavitra na serivisy an'ny antoko fahatelo izy. Ny taham-bidy dia mety miova arakaraka ny andro angatahana ny efitrano. Ohatra, ny tahan'ny talantalana dia mety ho lafo kokoa amin'ny faran'ny herinandro, izay matetika dia andro fitsangatsanganana. Satria ity 'tahan'ny FIT' ity no taha ambony indrindra alain'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny efitrano iray, matetika izy io dia misy fihenam-bidy hitaona ny vahiny mandeha an-tongotra hamandrika ny efitrano.
Ao amin'ny hotely fandraisam-bahiny dia hierarchy ara-dalàna eo ho eo ny firafitry ny tahan'ny -
Hita fa (araka ny efa noresahina tetsy aloha) ny taha ambony indrindra dia ny taha FIT foana. Ireo mpitsangatsangana sy mpandraharaha mpizahatany, noho ny fisian'izy ireo manao orinasan-tarika, matetika matetika mandritra ny taona (indraindray miverina miverina), dia mahazo ny taha ambany indrindra amin'ny hotely. (Ny orinasa orinasa dia mety ho eo amin'ity faritra ity).
Ny 'vaovao' eo amin'ny ambaratongam-pahefana ity dia ireo OTA izay afaka manome fihenam-bidy betsaka amin'ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny noho ny fahafahany mivarotra sy mahazo ny GDS (Global Distribution Systems) maro. Noho ireo fisehoan-javatra vaovao sy revolisionera ireo no mandroso ankehitriny ny ankamaroan'ny SME fizahantany. Ireo SME ireo dia tsy mila mampiasa vola amin'ny vidin'ny marketing be ary tena faly manome ny vidin'ny famandrihana 15% -20% amin'ireo OTA ireo ary mahazo fanampiana eran-tany hivarotra sy hivarotra ny vokariny.
Any Sri Lanka, nasehon'ity mpanoratra ity tao amin'ny famoahana teo aloha izay nitanisa ny sehatra tsy ara-potoana 50% n'ny fahatongavan'ireo mpizahatany rehetra in 2016.
Ka inona ary no mitranga amin'ilay mpandeha FIT? Angamba tsy marina ny milaza fa manjavona ilay mpandeha FIT. Mifanohitra amin'izany aza, mihamaro ny olona maniry handeha tsy miankina. Fa ny zava-mitranga dia tsy afaka mahatsapa ny taha FIT amin'ireo hotely ireo ny hotely.
Miseho toa izao ny seho. Tonga tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ilay mpizahatany FIT ary niarahaba azy tamim-pahavitrihana ny talen'ny Front Office Manager, izay manome ny taha FIT miaraka amin'ny fihenam-bidy. Ny vahiny dia mamoaka ny PDA na telefaoniny marani-tsaina, mampifandray amin'ny iray amin'ireo OTA ary mampiseho amin'ny Manager ny taha ambany navoaka! Na dia afaka miady hevitra aza ny Manager ary milaza fa sarany manokana ho an'ny OTA izany, ny 'saka dia tsy ao anaty kitapo' ary fantatry ny vahiny ny fahefany mifampiraharaha! Matetika dia miafara amin'ny fandraisan'ny vahiny fihenam-bidy lehibe amin'ny tahan'ny FIT.
Rehefa nandefa mailaka tamiko ny mpiara-miasa tamiko iray amin'ny indostria “Tonga any amin'ny hotely misy anay izy ireo ary mampiasa ny Wi-Fi anay hifandray amin'ny Internet ary avy eo mangataka ny fihenam-bidy OTA!”
Noho izany, raha ny tena izy na dia mety mbola miresaka momba mpandeha FIT aza isika, ny tahan'ny FIT ary ny tahan'ny Rack dia lasa tantara haingana. Tsy maintsy manaiky an'io ny hotely ary ny OTA dia eto mba hijanona amin'ny endrika iray na amin'ny endriny hafa. Tsy maintsy mampiasa hetsika hafa izy ireo izay manome lanja ny fijanonan'ny vahiny hahafahan'izy ireo mandoa taha ambony kokoa ary hahatratra ny vokatra amboniny.